သတင်း - HDPE Siphon ရေနုတ်မြောင်းစနစ်
စီဖွန်ရေနုတ်မြောင်းအကြောင်းပြောရင် လူတိုင်းက သိပ်မရင်းနှီးကြဘူး၊ ဒီတော့ siphon ရေနုတ်မြောင်းတွေ နဲ့ သာမန် ရေနုတ်မြောင်းတွေကြားက ကွာခြားချက်တွေက ဘာတွေလဲ။သိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လာ၍ လိုက်နာပါ။
ပထမဦးစွာ၊ ရေနုတ်မြောင်းအခင်းအကျင်းရှိ siphon ရေနုတ်မြောင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပြောဆိုကြပါစို့။
1. siphon ရေနုတ်မြောင်းစနစ်တွင်၊ မြေဆွဲအားစနစ်ရှိ တူညီသောပိုက်လုံးပတ်ရှိ ရေနုတ်မြောင်းပိုက်၏ discharge flow သည် ရေနုတ်မြောင်းပိုက်၏ discharge flow ထက် များစွာ ကြီးမားပါသည်။
2. တူညီသောမိုးရေပမာဏအတွက်၊ ပိုက်နံရံရှိ siphon ရေနုတ်မြောင်းစနစ်ရှိ ပိုက်အတွင်းရှိ ရေ၏သက်ရောက်မှုသည် ကြီးမားပြီး အားကောင်းသည်။
ထို့ကြောင့် siphon ပိုက်သည် အနုတ်လက္ခဏာဖိအားအောက်တွင်ရှိပြီး ပိုက်၏ မာကျောမှုမှာ အထူးမြင့်မားသည်။သာမာန် PE ပိုက်သည် siphon ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဖိအားအောက်တွင် မရှိဘဲ၊ အထူး hdpe ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။၎င်းကို siphon ယိုစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်က ဆုံးဖြတ်သည်။မိုးရွာသွန်းမှုအစောပိုင်းအဆင့်တွင်၊ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိစုဆောင်းထားသောမိုးရေ၏အမြင့်သည် siphon မိုးရေပုံး၏ဒီဇိုင်းပုံစံမိုးရေချိန်ထက်မကျော်လွန်ပါက၊ siphon ရေနုတ်မြောင်းစနစ်တစ်ခုလုံး၏ရေနုတ်မြောင်းနည်းလမ်းသည်ဆွဲအားရေနုတ်မြောင်းစနစ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
ခေါင်မိုး၏ မိုးရေအမြင့်သည် စီဖွန်မိုးရေပုံး၏ ဒီဇိုင်းမိုးရေချိန်ထက် ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်၊ စီဖွန်စနစ်၏ ပိုက်များတွင် စီဖွန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး စနစ်အတွင်းရှိ ရေနုတ်မြောင်းပိုက်များသည် အပြည့်စီးဆင်းနေမည်ဖြစ်သည်။ယခုအချိန်တွင် ပိုက်များတွင် ရေများ အရှိန်ပြင်းပြင်း စီးဆင်းနေပြီး မိုးရေများသည် ပိုက်များတွင် ရှိနေသည်။အနုတ်လက္ခဏာဖိအား၏ စုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင်၊ ၎င်းအား မြင့်မားသောစီးဆင်းနှုန်းဖြင့် အပြင်ဘက်သို့ ထုတ်လွှတ်သည်။ထို့ကြောင့် siphon ရေနုတ်မြောင်းသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။
1. HDPE ပိုက်များသည် အလေးချိန် ပေါ့ပါးပြီး တပ်ဆင် ကိုင်တွယ်ရ လွယ်ကူသည်။siphon ရေနုတ်မြောင်းတည်ဆောက်မှုပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ရေနုတ်မြောင်းကို တပ်ဆင်သည့်အခါ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။တူးဖော်မှုပမာဏနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်ပမာဏကို လျှော့ချနိုင်သည့် groove တစ်လျှောက် ပိုက်လိုင်းကို ချသည့်အခါတွင် ပိတ်ထားသော anti-sepage system ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် butt welding နှင့် capacitor welding တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
2. HDPE ပိုက်သည် ပြင်းထန်သောဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မိလ္လာ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့နှင့် အခြားအရာများကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။နှစ် 50 နီးပါးဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်အတူရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
ထို့အပြင် မိုးရွာသောအခါ ရိုးရာရေနုတ်မြောင်းများသည် ရေနုတ်မြောင်းသံကဲ့သို့ ဆူညံသံများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ဤသည်မှာ မြေဆွဲအား ရေနုတ်မြောင်း ပိုက်များကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ရေထုထည် အလုံအလောက် ကြီးမားသောအခါ၊ မြေဆွဲအား ဖိအားကြောင့် ရေနုတ်မြောင်း ပိုက်၏ အဝင်ဝတွင် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။မြင့်မားသောဖိအားဖြင့် ရေသည် မကျဆင်းနိုင်သော်လည်း ပိုက်ထဲသို့ ဓာတ်ငွေ့အများအပြားကိုသာ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ပူဖောင်းများသည် ပိုက်နံရံကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပွတ်တိုက်ကာ ကျယ်လောင်သော ဆူညံသံကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ရေစီးဆင်းမှုကို စုပ်ယူသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ရေစီးဆင်းမှုသည် ထိပ်တန်းဖိအားဒဏ်ကို ဆက်တိုက်ခံရသောကြောင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းမှာ နှေးကွေးနေပါသည်။HDPE siphon drain pipe သည် ဤပြဿနာရှိမည်မဟုတ်ပါ။